LG G3 ကိုမိတ်ဆက်ပြသလိုက်ပြီဖြစ်သည် Androidsis
LG G3 သည်တရားဝင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်
Alfonso က de Frutos | | LG
ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူကြယ်ပွင့် terminal အသစ်တွင်ထုတ်လွှင့်သောယိုစိမ့်မှုသည် LG G3 ၏တင်ဆက်မှုသည်သတင်းများမပြသသော်လည်းအာရှကုမ္ပဏီကြီး သူကသူ့လက်အနည်းငယ်အေ့စ်တက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသစ်ကကိုရီးယားစမတ်ဖုန်း၏တင်ပြချက်၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ
Pollyanna Woodward ကပွဲတော်ကိုတင်ဆက်ရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Galaxy S5၊ HTC One M8 သို့မဟုတ် Sony Xperia Z2 တို့ကဲ့သို့ဟဲဗီးဝိတ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဖုန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသခဲ့သည်။ ထိုအခါမြင်လျှင် LG G3 ၏အင်္ဂါရပ်များ တစ်ခုကရှင်းနေပါတယ်။ စစ်တွေအများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။
1 LG G3 သည် ၅.၅ လက်မ QHD မျက်နှာပြင်ပါသည့်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
2 လေဆာ auto focus နှင့်အတူနောက်ကင်မရာ
3 အသစ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု software ကို
4 LG G3 စမတ်ဖုန်းအသစ်စတင်မိတ်ဆက်
5 LG G3 ဓာတ်ပုံပြခန်း
LG G3 သည် ၅.၅ လက်မ QHD မျက်နှာပြင်ပါသည့်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
LG သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောနယ်ပယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် size အရွယ်အစား optimizationသင်၏ကိရိယာများ။ LG G3 နှင့်အတူသူတို့သည်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသော်လည်းကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏အသစ်စက်စက်ပုံစံသည်အလွန်ကျစ်လစ်သည်။
အမြင့် ၁၄၆ မီလီမီတာ၊ အရှည် ၇၄.၆ မီလီမီတာနှင့်အကျယ် ၉.၁ မီလီမီတာနှင့်အလေးချိန် ၁၄၉ ဂရမ်အပြင် LG G146 သည်အလွန်အသုံးဝင်သော terminal ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူကသူနှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းသစ်ရဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်ပရီမီယံပစ္စည်းတွေကိုသုံးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ဘာလဲ eLG G3 ကိုလူမီနီယံကိုယ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်အီးကအရည်အသွေးတစ်ခုထိကိုပေးသည်။
အဘယ်သို့သင်၏အကြောင်းကိုပြောပြရန် ၅.၅ လက်မ Quad HD မျက်နှာပြင် Resolution 2.560 x 1.440 pixels နှင့်သိပ်သည်းဆ 538 ppi ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်များကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Qualcomm Snapdragon 801 ပရိုဆက်ဆာကို ၂.၅ GHz ပါဝါ၊ RAM 2.5 GB နှင့်သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှု3GB ထည့်သွင်းပါက 16 GB ဗားရှင်းရှိသော်လည်း LG G32 သည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်။
ကျေးဇူးတင်ရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာ LG ၌ယောက်ျားများသည်နောက်ဆုံး၌aဖြစ်သည် micro SD ကဒ်အထိုင် သင်၏အထင်ကရ terminal အတွက်စက်၏သိုလှောင်မှုပမာဏ 128 GB အထိချဲ့နိုင်သည်။ LG G2 နှင့်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည့်အနည်းငယ်သောအမှားတစ်ခုမှာ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး၊ 3.000 mAh ဘက်ထရီ သူတို့က LG G3 ကိုခဏလောက်ကြိုးပေးခိုင်းလိမ့်မယ်။ ငါဒီအချက်ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ အထူးသဖြင့် G2 မှာတူညီတဲ့လျှပ်စစ်အားသွင်းထားတဲ့ဘက်ထရီရှိတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားတာ။ ဆိုးလ်အခြေပြုထုတ်လုပ်သူသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံကိုသိသော်လည်း G3 တွင်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုအလွန်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာသည်။ သူတို့ကဒီအဖြစ်အပျက်မှာပြောထားပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့စမ်းမစစ်သေးဘူးဆိုရင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအတည်မပြုနိုင်ဘူး။
လေဆာ auto focus နှင့်အတူနောက်ကင်မရာ
ပေမဲ့ 13 megapixel မှန်ဘီလူး Optical Image Stabilization ဖြင့် LG G3 ၏ကင်မရာကိုစွမ်းအားမြင့်ဖြစ်စေပြီးလေဆာ autofocus သည်ရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ထို့အပြင် LG G3 ၏တင်ဆက်မှုသည်မျှော်လင့်ရဆုံးအချိန်များထဲမှတစ်ခုသည်လေဆာဖြင့်အလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။.
ကင်မရာနောက်ဘက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသေးသေးလေးကဘာလဲဆိုတာကြာမြင့်စွာကတည်းကကျွန်တော်တို့တွေးနေခဲ့မိသည်။ ယခုအဖြေရှိသည်။ The အော်တိုအာရုံစိုက်လေဆာအာရုံခံကိရိယာ စက္ကန့် ၀.၂၇၅ စက္ကန့်အတွင်း Galaxy S0.275 သို့မဟုတ် Sony Xperia Z300 ၏မီလီစက္ကန့် ၃၀၀ ထက် ကျော်လွန်၍ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအာရုံစိုက်ရန်ကူညီသည်။
အသစ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု software ကို
LG အဖွဲ့သည်ဆော့ဝဲလ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသစ်အဆန်းများကိုထည့်သွင်းရန်ပြန်လာသည်။ ငါတို့သိပြီးသား ခေါက်ပါမျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်ပစ္စည်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်အသာပုတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှု။ သို့သော် LG ကနောက်ထပ်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူသည် Smart Notice ကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ဝင်စားစေမည့်သတိပေးချက်များသို့မဟုတ်သတိပေးချက်များကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အထများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်တစ်ခုမှာ G3 ၏စမတ်ကျသောကီးဘုတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ရာကိုပြုပြင်နိုင်သည်၊ အရွယ်အစားကိုပင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကီးဘုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအသားပုံစံများကိုသိမ်းဆည်းပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်ပုံစံနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒီဖုန်းရဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်သူတို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သင်ပြောနိုင်တယ်။
အန်းဒရွိုက် 4.4.2 LG G3 သစ်ကိုလှိမ့်ချရန်တာ ၀ န်ယူလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလွှာကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးများစွာသောထုတ်လုပ်သူများမအောင်မြင်သည့်အရာများဖြစ်သည်။
LG G3 စမတ်ဖုန်းအသစ်စတင်မိတ်ဆက်
LG G3 ကိုအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သတ္တုအနက်ရောင်၊ ပိုးဖြူ၊ တောက်ပသောရွှေ။ စတင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့နှင့်စျေးနှုန်းအရဇူလိုင်လတစ်လလုံးလုံးရောက်ရှိမည်ဟုသိရသော်လည်းကိုးရီးယားနိုင်ငံ၏တရားဝင်ဈေးနှုန်းကိုမူထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသော်လည်း LG G3 သည်ယူရို ၆၀၀ မှ ၆၉၉ ကြားကြားရှိသည်။
ကျနော့်အမြင်တွင် LG သည် LG G3 နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူဘဲကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူသည်လေဆာအာရုံခံကိရိယာအပြင်ရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူရန် QHD မျက်နှာပြင်နှင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ ငါထင်တယ် LG G3 သည်အလွန်အရောင်းရဆုံးအရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ Samsung နှင့် HTC တို့နှစ်ရှည်လများစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Prime range နှင့်မည်သို့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။
LG G3 ဓာတ်ပုံပြခန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 သည်တရားဝင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်
Harvin Sánchez Areniz ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း! နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ ခန့်မှန်းခြေစျေးနှုန်းကဘာလဲ? ထိုသူတို့ဖြစ်လျှင်သူတို့ကနိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှထွက်ခွာသွားသည့်ရက်စွဲကိုပေး၏? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Harvin Sánchez Areniz အားစာပြန်ပါ
မူအရမူ၎င်းသည်ဇူလိုင်လတစ်လလုံးတွင်စပိန်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာမပြောရသေးသော်လည်း၎င်းသည် ၆၀၀ နှင့် ၆၉၉ ကြားတွင်ရှိသည်။
ထိုစျေးနှုန်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည် hardware ရှိတူညီသောတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုကောင်းပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသော oneplus တစ်ခုထက် ပို၍ နှစ်သက်သည်။ နွေရာသီအလုံအလောက်စောင့်ဆိုင်းနှင့်အတူ။
သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများစွာနဲ့ Nova Launcher update ကို [APK ကို Download]
ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကို LG G Watch ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်